चिकित्सक संघको मतगणना शुक्रबार बिहानदेखि, उम्मेदवार र निर्वाचन समितिबीच ६ बुँदे सहमति – Health Post Nepal
चिकित्सक संघको मतगणना शुक्रबार बिहानदेखि, उम्मेदवार र निर्वाचन समितिबीच ६ बुँदे सहमति
२०७६ माघ २३ गते १७:५५
नेपाल चिकित्सक संघको २८औँ कार्यकारिणी समितिको मंगलबार सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना शुक्रबार बिहानदेखि हुने भएको छ । बिहीबार दिउँसो निर्वाचन समिति र उम्मेदवारहरूबीचको छलफलमा शुक्रबार बिहान साढे ९ बजेदेखि मतगणना थाल्ने सहमति भएको हो । बुधबार बिहानदेखि मतगणना सुरु गर्ने तय भएकोमा केही उम्मेदवारले विवाद उठाएपछि स्थगित भएको थियो ।
निर्वाचन समिति र उम्मेदवारबीचको बिहीबारको बैठकमा ६ बुँदे सहमति भएको छ । मतगणना ३ ठाउँमा गर्ने, यथासम्भव प्रविधिको प्रयोग गरी गणनाको प्रत्यक्षप्रसारण गर्ने सहमति भएको छ । गणनापूर्व निर्वाचन समितिले तयार गरेको आचारसंहिताबमोजिम मतगणना गर्न सबै उम्मेदवारले सघाउने सहमति भएको छ ।
कुनै मतदाताले संघका शाखा कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयमा दोहोरो मतदान गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता मतदाताको शाखाको मत रद्द गर्ने र केन्द्रको सदर गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
बाकसभित्र खसिसकेको मत कुन कसको, कसरी पहिचान गरेर रद्द गर्ने त ? निर्वाचन समितिका सदस्य मिलनचन्द्र घिमिरे भन्छन्, ‘यसमा हाम्रो एकदमै सिस्टमेटिक प्रावधान छ । निवेदन दिएर मतदान गर्नेले खामभित्र मतपत्र राखेर ढ्वाङमा खसाल्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार त्यसैअनुरूप मतदान गरेका छन् । गणनाका क्रममा हामी पहिले खाममा भएका मत छुट्याउँछौँ । मतदान गरेकाको शाखा र केन्द्रको नाम भिडाउँदा कसैले दोहोरो मतदान गरेको पाइएमा केन्द्रको सदर गरेर शाखाको रद्द गर्छौं ।’
संघका उपत्यकाबाहिरका शाखाको मतदान केन्द्रमा मतदान गरिसकेका केही मतदाताले निवेदन दिएर उपत्यकाको केन्द्रीय कार्यालयमा समेत मतदान गरेको पाइएको भन्दै विवाद निम्तिएको थियो ।
मतगणना अवधिमा आइपर्ने जुनसुकै विवादमा निर्वाचन समितिको निर्णय सबैलाई मान्य हुने सहमति भएको छ ।
यसअघि बुधबार बिहानैदेखि बुलुकी अबेरसम्म चलेको मतगणनाको प्रयास विफल भएको थियो । डा. पुष्पमणि खराल नेतृत्वको पेसागत समावेशी समूह (सत्तारूढ नेकपानिकट मानिएको) बाट महासचिवका उम्मेदवार डा. मधुर बस्नेतले एकपछि अर्को विवाद झिकेर अडान कायम राखेपछि गणना स्थगित गरिएको थियो । सुरुमा मतगणनास्थलमा क्यामेराजडानको माग उठाएका उनले पछि एक स्थानमा मात्र गणना गर्नुपर्ने, सबै मत प्रोजेक्टरमार्फत देखाइनुपर्नेलगायत अडान लिएका थिए ।
बेलुकीपख ३ ठाउँमा मतगणना गर्ने र पहिले उपत्यकाबाहिरका १६ शाखाका १८ मतदान केन्द्रको मत एकआपसमा मिसाएर गन्ने सहमतिपछि करिब ७ बजे ढ्वाङ खोलिए पनि डा. बस्नेतले पुनः विवाद झिकेपछि गणना अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको थियो । बिहीबार निर्वाचन समितिले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर सहमति गराएको हो ।